Best Testosterone Enanthate (test e) ipowder factory factory
/ iimveliso / testosterone / Testosterone Enanthate powder
Akukho kalo SKU: 315-37-7-1. Udidi: testosterone
I-AASraw ngumvelisi oqeqeshiweyo we-Testosterone Enanthate powder ene-lab ezimeleyo kunye nefektri enkulu njengenkxaso, yonke imveliso iya kwenziwa phantsi kolawulo lweCGMP kunye nenkqubo yokulawula umgangatho olandelwayo. Inkqubo yokubonelela izinzile, zombini ii-odolo zokuthengisa kunye nee-wholesale zamkelekile.
Ividiyo ye-Testosterone Enanthate powder
I-Testosterone Enanthate eluhlaza powder Iimpawu ezisisiseko
Igama lemveliso: I-Testosterone Inanthate powder
Inombolo ye-CAS: 315-37-7
I-molecular Formula: C26H40O3
Isisindo somzimba: 400.6 g / mol
I-Testosterone Enanthate powder, eyaziwa ngokuba yi "Test E powder".
I-Testosterone Enanthate yindlela yokutofwa ye-testosterone yesenzo esicothayo. Inaliti enzulu ye-intramuscular, ichiza lenzelwe ukubonelela ngokukhululwa okuqhubekayo kwe testosterone egazini malunga neeveki ezimbini ukuya kwezintathu. Ukuze kugcinwe inqanaba eliqhelekileyo le-physiological ye-testosterone kunyango lokubuyisela i-androgen, i-heptanate ithandwa ngabadlali ekukhuthazeni amandla emisipha kunye namandla.
I-Testosterone Enanthate isetyenziswa ngokuqhelekileyo kwiimvavanyo zeklinikhi ukuthatha indawo yamanqanaba aqhelekileyo e-testosterone kumadoda amadala. Oku kunokubonakaliswa ekulahlekelweni kwe-libido, ubunzima bemisipha kunye namandla aqhelekileyo kunye namandla. I-Testosterone Enanthate ikwasetyenziselwa ukunyanga i-cryptorchidism kunye nokulibaziseka kokufikisa kumadoda afikisayo kwaye ngamanye amaxesha amayeza ancedisayo kubasetyhini abangakwaziyo ukusebenzisa umhlaza webele. Ifomu ye testosterone nayo ifundwe ngempumelelo enkulu njengokhetho lokulawula ukuzalwa kwamadoda. I-446, i-200 mg ye-injection yeveki ibonakaliswe ukunciphisa ngokufanelekileyo imveliso yamadlozi, eya kwamkelwa kunyango lwasentshona. Namhlanje, nangona inani elikhulayo lezinye iindlela zonyango, i-Testosterone Enanthate iseyona ndlela ichazwe ngokubanzi ye testosterone kwihlabathi.
I-Testosterone Enanthate yindlela yokukhupha ngokukhawuleza ye-hormone ye-testosterone kwaye iya kuba yifomu yokuqala enkulu / ende ye-ester testosterone esetyenziswayo. I-Testosterone Enanthate yinto enye enkulu ye-ester base testosterone compound. Le yi-hormone ye-testosterone ecocekileyo ene-carboxylic acid ester efakwe kwi-Enanthate (i-enanthoic acid). I-ester ngokwayo ifakwe kwi-hormone kwiqela le-17-beta hydroxyl. Ngokuqhotyoshela i-Enanthate ester, oku kuvumela ukulawulwa kweehomoni ezisebenzayo kunye nexesha lokukhululwa ngokupheleleyo. Nje ukuba itofwe, i-testosterone ayisebenzi de i-ester iqale ukukhupha kwihomoni. I-detachment iyonke ayenzeki ngaxeshanye kodwa ivumela ukukhutshwa okucothayo, okuzinzileyo kwehomoni esebenzayo emzimbeni. Nje ukuba ifakwe, kuya kubakho i-spike ebukhali kwi-testosterone ngaphakathi kweeyure zokuqala ze-24-48 ze-post injection. Ukusuka apha ihomoni iya kuhlala isahlula kwaye ichithekile emzimbeni. Ngexesha layo, i-Testosterone Enanthate ithatha isiqingatha sobomi malunga neentsuku ze-8, eziya kuvumela ukuba nje isitofu esinye kwiiveki ze-2 kwisimo sonyango. Nangona kunjalo, zonke iintsuku ezi-7-10 ziya kubonakala zisebenza ngakumbi ekugcineni uzinzo.
Testosterone Enanthate powder Ukusetyenziswa
Isitofu se-Intramuscular: ngokuqhelekileyo i-50-250mg rhoqo, zonke ii-2-4weeks. Umsebenzi wezesondo uyancipha, i-100-400mg rhoqo, amaxesha angama-1-2 yonke imihla. Isifo esidliwayo, i-100-200mg rhoqo, zonke ii-3-4weeks.
Imijikelezo ye-Testosterone Enanthate idla ngokuba yinto yobuninzi okanye yokuzuza ubunzima, nangona inokusetyenziswa ngendlela ecacileyo ekusikeni okanye Ukulahlekelwa ngamatye imijikelo. Ukufumana ubunzima okanye ubuninzi, i-Testosterone Enanthate idla ngokusetyenziswa kwi-dosage ephezulu (ngokuqhelekileyo ubuncinci be-500mg ngeveki), kwaye ngenxa yokuba i-anabolic steroid ene-ester ende efakwe kuyo, iya kubonisa i-half-life of around. I-7 - iintsuku ze-10, kwaye ngoko ke imijikelezo ye-Testosterone Enanthate idla ngokuqhutyelwa ixesha le-10 - iiveki ze-12 okanye ngaphezulu.
I-Testosterone enanthate yincindi ecacileyo okanye etyheli efika kwi-5-milliliter (ml) yeglasi yeglasi. Itofwa kwisihlunu sempundu qho ukuya kwiiveki ezine. Ukuphepha utshintsho olukhulu kumanqanaba ehomoni, kunye nokuguquka kwemizwelo okunokuthi kufike kunye nabo, iidosi ezisezantsi zihlala zisetyenziswa ngamaxesha amafutshane.
Ichiza elisebenzayo, elinqunyanyiswa kwioli yesesame, linexesha lokukhululwa eliqhubekayo kwiiveki ezimbini ukuya kwezintathu.
Idosi inokwahluka ngokomntu kodwa idla ngokusetyenziswa ngolu hlobo lulandelayo:
I-hypogonadism yamadoda: i-50 ukuya kwi-400 milligrams (mg) nganye kwiiveki ezimbini ukuya kwezine
Ukulibaziseka kokufikisa kwamadoda: 5 ukuya kwi-200 mg rhoqo kwiiveki ezimbini ukuya kwezine, kwiinyanga ezine ukuya kwezintandathu
Umhlaza webele weMetastatic: 200 ukuya kwi-400 mg rhoqo kwiiveki ezimbini ukuya kwezine
Unyango lwe-hormone ye-Transgender: i-50 ukuya kwi-200 mg ngeveki okanye i-100 ukuya kwi-200 mg nganye kwiiveki ezimbini.
I-Testosterone Inanthate powder iingcebiso ezifudumeleyo
Ukuthatha i-testosterone enanthate kwiidosi eziphezulu kunokuba zichazwe kunokukhokelela ekuxhatshazweni okanye ekusebenziseni kakubi. Oku kunokubangela iziphumo ebezingalindelekanga ezimandundu, ezinjengokuhlaselwa sisifo sentliziyo, ukusilela kwentliziyo, ukufelwa yintliziyo, ukudandatheka, ukubona izinto ezingekhoyo, nokukhohlisa. Thatha amayeza njengoko uyalelwe ngumboneleli wakho ukuthintela umngcipheko woxhatshazo.
I-Testosterone enanthate akufanele isetyenziselwe ukwakha umzimba okanye ukuphucula amandla akho ezemidlalo ngenxa yeengozi zeziphumo ezibi kakhulu zokuxhatshazwa. I-FDA ivume kuphela eli yeza kunyango lwe testosterone ephantsi kunye nokulibaziseka kokufikisa emadodeni kunye nomhlaza wamabele kwabasetyhini abathile. Thatha i-testosterone enanthate njengoko kumiselwe ngumboneleli wakho.
Ukuba ungumfazi othatha i-testosterone enanthate yomhlaza webele, iyeza linokubangela ukuphuhliswa kweempawu zesilisa, njengokutshona kwelizwi, i-acne, ukungabikho kwexesha lokuya esikhathini, kunye neenwele ezininzi ebusweni nasemzimbeni. Ukuthintela oku ekubeni kube ngokusisigxina, yeka iyeza xa uqala ukuqaphela ezi mpawu. Thetha nomboneleli wakho ukuba unenkxalabo malunga nesi siphumo.
I-Testosterone enanthate inokubangela ukuba indawo yebele emadodeni ibe nkulu, ibe buhlungu, okanye ithenda. Oku kunokuqhubeka kulo lonke unyango nge testosterone enanthate. Yazisa umnikezeli wakho ukuba oku kuyakhathaza.
I-Testosterone enanthate inokunciphisa iswekile yegazi. Ukuba unesifo seswekile, unokufuna ukujonga iswekile yegazi rhoqo ngelixa uthatha eli yeza. Qinisekisa ukuba uyayazi indlela yokuqaphela kunye nokunyanga iswekile yegazi ephantsi. Thetha nomboneleli wakho ukuba unesifo sikashukela kwaye ufumana naziphi na iimpawu zeswekile yegazi ephantsi, kuquka ukugubha, ukubila, ukubetha kwentliziyo, kunye nokudideka, kuba unokufuna utshintsho kumayeza akho.
I-Testosterone enanthate inokunciphisa inani lakho lesidoda, elinokuchaphazela amandla akho okuba nomntwana (ukuzala). Oku kunokwenzeka ngakumbi ukuba usebenzisa iidosi eziphezulu ze testosterone enanthate kwaye kukho ithuba lokuba ezi ziphumo zisisigxina. Vumela umboneleli wakho ukuba ucinga ukuba nomntwana ngaphambi kokuba uqale i-testosterone enanthate.
Kunconywa ukuba ugcine i-testosterone enanthate kwindawo yokushisa. Qinisekisa ukuba uyayihlola i-vial phambi kokutofa kwawo nawaphi na amasuntswana okanye utshintsho lombala. Ukuba ubona iikristale kwi-vial, ukufudumala kwaye ngobunono ujikelezisa i-vial phakathi kweentende zezandla zakho ukunyibilikisa kwakhona ezo kristale.
Testosterone Enanthate iiresiphi ezitofwayo
Iresiphi eqhelekileyo ye-250mg/mL ye-100mL Akukho BB
I-25 gram ye-Testosterone Ethanate powder (18.75mL)
Iresiphi eqhelekileyo ye-250mg/mL ye-100mL Akukho BB #2
Iresiphi eqhelekileyo ye-250mg/mL ye-100mL
Iresiphi eqhelekileyo ye-300mg/mL ye-100mL
I-30 gram ye-Testosterone Ethanate powder (22.5mL)
(iya kusebenza ukuya kuthi ga kwi-350mg, mhlawumbi nangaphezulu)
Iresiphi eqhelekileyo ye-400mg/mL ye-100mL
I-40 gram ye-Testosterone Ethanate powder (30mL)
Thenga Testosterone Enanthate Umda
Baninzi ababoneleli be-Testosterone Enanthate abafumaneka kwi-intanethi nakwiivenkile ezibonakalayo kwihlabathi jikelele. Nangona kunjalo, kufuneka ulumke kakhulu ukuba ufuna ukufumana ichiza eliphezulu eliya kukuqinisekisa iziphumo ezisemgangathweni ekupheleni kwemijikelo yakho. Ayiyiyo yonke i-testosterone enanthate umenzi oyifumana kwi-Intanethi iyinyani, abanye bakhona nje ukwenza imali, kwaye abakhathali ngeziphumo oza kuzifumana emva kokuthatha iidosi zakho. Ngaphambi kokuba uthenge i-testosterone enanthate, qala wenze uphando lwakho. Qinisekisa ukuba uyayiqonda indlela umthengisi we testosterone enanthate asebenza ngayo ngaphambi kokuba wenze nayiphi na iodolo. Funda uphononongo olwahlukileyo lwabathengi kunye nokujonga iireyithingi zenkampani.
Singoyena mthengisi ohamba phambili we-testosterone enanthate kunye nomenzi kulo mmandla. Iwebhusayithi yethu isebenziseka lula, ngoko ke unokwenza iodolo yakho ngokulula usebenzisa i-smartphone yakho, ithebhulethi, okanye idesktop ukusuka kwikhaya lakho okanye iofisi yakho. Sihlala siqinisekisa ukuba sihambisa zonke iimveliso ngexesha elifutshane kakhulu. Unokuthenga i-testosterone enanthate powder ngobuninzi okanye ngokwaneleyo ngokwaneleyo kwimijikelezo yakho yobuninzi okanye yokusika. Khumbula, nokuba ungalifumana ngokulula kangakanani iyeza, ungaqalisi ukulithatha ngaphandle kwesikhokelo sikagqirha wakho.
 Irwig MS (Aprili 2017). "Unyango lweTestosterone lwamadoda atshintshe isini". ILancet. Isifo seswekile kunye ne-Endocrinology. 5 (4): 301–311. doi:10.1016/S2213-8587(16)00036-X. PMID 27084565.